Tag: Mawduuca mawduuca | Martech Zone
Tag: khadka maadada
Emoji ma ku jiraa Saamaynta Khadkaaga Mawduuca Emailku Qiimayaasha Furan? 🤔
Talaado, July 18, 2017 Talaado, July 18, 2017 Douglas Karr
Waxaan la wadaagnay faahfaahin qaar waqtiyadii la soo dhaafay sida qaar ka mid ah suuqleyda ay emojis ugu darayaan isgaarsiinta suuqgeynta. Dabaaldegga Maalinta Emoji Adduunka - haa… waxaa jira wax caynkaas ah - Mailjet waxay samaysay tijaabooyin qaarkood iyadoo la adeegsanayo emojis ku jira khadadka mawduucyada emailka si loo arko sida emojilada kala duwan ay saameyn ugu yeelan karaan qiimaha iimaylka. Qiyaas waxa Way shaqaysay! Habka: Mailjet waxay bixisaa astaamo tijaabo ah oo loo yaqaan baaritaanka / x. Imtixaanka A / X wuxuu meesha ka saaraa mala-awaalka waxa sida ugu fiican u shaqeeya adiga oo kuu oggolaanaya
Arbacada, Agoosto 14, 2013 Axad, Agoosto 2, 2015 Douglas Karr
Mar labaad ayey dhacday. Intii aan dib u eegay liistada (aan la joojin karin) ee emayllada garaacayay sanduuqa sanduuqa, waxaan ogaaday emaylka jawaabta. Mawduuca mawduuca, dabcan, wuxuu ku bilaabmay RE: markaa indhahaygu way qabteen oo markiiba waan furay. Laakiin jawaab ma ahayn. Waxay ahayd suuqley u maleynayay inay kordhinayaan sicirka furan iyagoo been u sheegaya dhammaan macaamiishooda. Intii ay shaqeyneysay sicirka ay furan yihiin, waxay lumiyeen rajo iyo